Ny rindran-tsary ao amin'ny iOS 15 dia hampahafantatra antsika avy amin'iza ny fampiharana ny sary | Vaovao IPhone
Rehefa mandeha ny andro dia mahita izy ireo fisehoan-javatra vaovao izay tsy nambaran'ny Apple tao amin'ny WWDC 2021, Fampiasana izay na dia marina aza dia tsy mahaliana ny besinimaro, raha mety ho an'ny mpampiasa sasany izany. Ny iray amin'ireo fiasa mahaliana ireo dia hita ao amin'ny fampiharana Photos.
Ny fampiharana Photos miaraka amin'ny iOS 15, mamela antsika midira amin'ny data EXIF ​​raha mila sary fa efa notehirizinay tao amin'ny fitaovantsika niaraka tamin'ny fampahalalana avy amin'ny toerana anaovana ny fisamborana (raha toa ka misy data GPS) miaraka amin'ny data hafa. Ho fanampin'izany, mamela antsika hahafantatra ihany koa ny fomba nahatratraran'izy ireo ny vatolantsika.
Azo antoka fa amin'ny fotoana iray hafa, rehefa mandinika ny rakitsary misy sary ianao dia manontany tena ahoana ny sary na horonantsary sasany tonga tao. Amin'ny iOS 15, afaka mahafantatra haingana sy mora ny niandohan'ireo sary ireo ianao.
Araka ny hitantsika amin'ny sary etsy ambony, eo amin'ireo metadata izay atolotry Apple antsika ny sary rehetra tahirintsika, aseho koa ny fiaviany. Raha ny sary etsy ambony dia hitantsika ny fomba eNy loharanon'ity sary ity dia ny fampiharana Safari.
Rehefa manindry ny Safari, ny fampiharana dia hampiseho ny sary rehetra izay avy amin'ny loharano iray ihany. Manantena aho fa ity asa ity dia hahafantatra ny sary sy horonan-tsary rehetra izay voatahiry ao amin'ny fitaovantsika ary avy amin'ny WhatsApp.
Fiasa iray izay tsy isalasalana fa hankasitraka ireo mpampiasa rehetra izay tsy nametraka ny fitsitsiana sary sy horonan-tsary ao anatin'ny safidin'ity fampiharana fandefasan-kafatra ity, satria hahafahanao mamafa azy rehetra miaraka ary manafaka toerana be dia be.
Amin'izao fotoana izao dia tsy misy afa-tsy ho an'ny mpamorona ny iOS 15. Tsy ho amin'ny volana jolay izao, araka ny nohamafisin'i Apple, rehefa natomboka ny beta voalohany ho an'ireo mpampiasa rehetra izay ao anatin'ny Programa beta ho an'ny daholobe an'ny Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » Ny fampiharana Photos ao amin'ny iOS 15 dia hampahafantatra antsika izay fampiharana niavian'ny sary
Apple dia mamoaka ny beta fahatelo an'ny iOS 14.7, watchOS 7.6 ary macOS 11.5